Magarage nenzvimbo dzekupaka Kutengesa uye Kubhadhara muUnited States
Whooops, hapana rondedzero yemitambo yekutsvaga maitiro. Edza Google Search:
United States of America (USA), inowanzozivikanwa seUnited States (US kana US) kana America, inyika ine nyika makumi mashanu, dunhu remubatanidzwa, nzvimbo shanu dzinozvitonga, uye nhumbi dzakasiyana siyana. Pamamirimita 3,8 miriyoni mamaira (9.8 miriyoni km2), inyika yenyika yechitatu- kana yechina-yakakura nenzvimbo yakazara. Yakawanda yenyika ino iri pakati peNorth America pakati peCanada neMexico. Nechiverengero chavagari vanopfuura mamirioni mazana matatu nemakumi masere neshanu, iyo US ndiyo nyika yechitatu inowanikwa vanhu vakawanda munyika (mushure neChina neIndia). Guta guru iWashington, DC, uye guta rine vanhu vakawanda iNew York City. MaIndia-maIndia akatama achibva kuSiberia kuenda kuNorth America mainini makore zviuru gumi nembiri apfuura. Colonization yokuEurope yakatanga muzana ramakore rechi 16. United States yakabuda kubva kumatatu gumi nenhatu eBritish akagadzwa pamwe chete neEast Coast. Kunetsana kwakawanda pakati peGreat Britain nemakoloni kwakatungamira Hondo yeAmerica yeChimurenga ichipfuurira pakati pa 1775 na 1783, ichitungamira kurusununguko. United States yakatanga kuwedzera kwakasimba muNorth America muzana rose ramakore re1900 - zvishoma nezvishoma kutora nzvimbo itsva, kudzinga maNative America, uye kubvuma nyika itsva - kusvika 1848 payakatora nyika. Mukati mehafu yechipiri yezana ramakore re19, Hondo yeAmerica yeAmerica yakatungamira mukubviswa kwouranda muUnited States. Hondo yeSpain-America neHondo yeNyika I zvakasimbisa chimiro chenyika seuto rehondo yenyika. United States yakabuda muHondo Yenyika yechipiri semasimba epasirese. Yakanga iri nyika yekutanga kugadzira zvombo zvenyukireya uye ndiyo chete nyika yaifanira kuvashandisa muhondo. Munguva yeCold War, United States neSoviet Union yakakwikwidza muPasiketi Race, ichiguma ne1968 Apollo 11 mishoni, iwo mwenje wedenga wakatanga kutora vanhu paMwedzi. Kupera kweCold War uye kudonha kweSoviet Union muna 1991 kwakasiya United States seyakanyanya simba pasirese.United States inyika yemubatanidzwa uye inomiririra democracy. Inhengo yekutanga yeUnited Nations, World Bank, International Monetary Fund, Organisation of American States (OAS), NATO, nemamwe masangano epasi rese. Inhengo isingaperi yeUnited Nations Security Council. Inyika yakasimukira kwazvo, United States ndiyo hupfumi hukuru hwenyika neinonzi GDP, yechipiri yakakura nekutenga masimba masimba, uye inoverengeka chikamu chimwe muzvina cheGDP yepasi rose. United States ndiyo inonyanya kupinza nyika uye wechipiri mukurumbira kuburitsa zvinhu, nemutengo. Kunyangwe huwandu hwayo huwandu hwemakumi mana muzana epasirese, hwunobata 29.4% yeupfumi hwenyika, chikamu chikuru cheupfumi hwenyika hwakatarisana mune imwe nyika. Zvisinei nekusiyana kwemari neupfumi, United States inoramba ichikwira zvakanyanya pamatanho ekubata mabasa ezvehupfumi, kusanganisira muvhareji muhomwe, mari yepakati, hupfumi hwepakati, kusimudzira vanhu, per capita GDP, uye kugadzirwa kwevashandi. Iri ndiro simba rekutanga mune zvehondo pasi rose, rinogadzira zvinopfuura chikamu chimwe muzvitatu chemashandisirwo emauto epasi rose, uye rinotungamira rezvematongerwo enyika, retsika, uye resaenzi pasi rese.
Garwe rekugara (/ ˈɡærɪdʒ / kana / ɡæˈrɑːʒ /) chivakwa chakakomberedzwa, chakavakirwa chekuchengetedza mota kana mota dzinogona kunge dziri chikamu kana chakanamatira pamba ("yakanamirwa garandi"), kana imwe inovakwa kana kudururwa ( garage "). Magaro ekugara kazhinji ane nzvimbo kune imwe kana maviri mota, kunyangwe matatu-mota magaraji anoshandiswa. Kana garaji rakabatanidzwa paimba, garaji kazhinji rine mukova wekupinda mumba. Magarage anowanzove nemusuwo wakafara uyo unogona kumutswa kubvumira kupinda uye kubuda kwemota, uye wozovhara kuchengetedza mota. Garaji inochengetedza mota kubva pamhepo, uye, kana iine suo rekukiya garage, inodzivirirawo mota (ma) kubva mukubiwa uye mukuparadza. Maharage anoshandiswawo kune akasiyana siyana emapurojekiti anosanganisira kupenda, kugadzira huni nekuunganidza mapurojekiti.